चीन आफ्नै निजी लेबल ल्याश थोक झूटा नेत्रहीन मिंक कारखाना र निर्माता बनाउनुहोस् Weiti
तपाईंको आफ्नै निजी लेबल ल्याशहरू थोक झूटा eyelashes मिंक सिर्जना गर्नुहोस्
१, EDITH शैली 3d छोटा मिंक झूटा eyelashes र नरम कपास ब्यान्ड
२, १००% हस्तनिर्मित क्रूरता नि: शुल्क
3, बरफ प्याकेजिंग बक्सको साथ कस्टम निजी लेबल eyelashes
,, कारखाना प्रत्यक्ष थोक मूल्य
थ्रीडी MINK EYELASHES
√ १००% वास्तविक मिंक फर
√ नरम र आरामदायक
Private निजी लेबल अनुकूलन गर्नुहोस्
१००% वास्तविक मिंक क्रूरता मुक्त
अनुकूलित निजी लेबल बक्स
नि: शुल्क फोटो र नि: शुल्क लोगो डिजाइन
DHL, FEDEX, UPS, EMS, SF, TNT, BY SEA मार्फत
Stock- working कार्य दिन तैयार स्टकको लागि, -20-२० कार्य दिन अनुकूलितका लागि
T / T, Paypal, West Union, क्रेडिट कार्ड
उत्तम मेकअप सजावट
२.लक्षाहरू नेत्रहरूले तपाईंको आँखालाई धेरै उज्ज्वल र आकर्षक बनाउँदछन्, तपाईंको आँखा परिवर्तन गर्दछन्, ठूला र धनी eyelashes, एक निर्दोषपन निर्बाध भावना पैदा। साँच्चिकै आँखामा जोड दिनुहोस्। लागू गर्न र हटाउन सजिलो, यो धेरै नरम र आरामदायी छ आँखामा कुनै क्षति बिना।
आश्चर्यजनक 3D रेन्डरिंग
१. थ्रीडी प्रभावहरू ले तपाईंलाई कल्पना गर्न सक्ने सबैभन्दा रमाईलो लुक दिन्छ। हल्का वजन र प्रयोग गर्न सजिलो, झूटा eyelashes तपाईंको आफ्नै eyelashes को साथ निर्बाध मिश्रण गर्दछ, eyelashes लगाउँदा अधिकतम सुविधा प्रदान गर्दछ र लामो समय अवधिमा लगाउँदा कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन।
3D.4. हाम्रो थ्रीडी झूटा eyelashes को प्रत्येक जोडी हाम्रो कार्यकर्ताहरु द्वारा 100% हस्तनिर्मित छ। क्वालिटी एश्योरेंस, तपाईंको चाहने लम्बाइ फिट गर्नको लागि अन्तहरू छाँटेर तपाईंको नेदरलाइहरू अनुकूलित गर्नुहोस्।
3.3.ह्यान्डमेड झूटा eyelashes, सबैभन्दा आकर्षक र ठाठ प्रभाव। वैज्ञानिक डिजाइनले यसलाई आँखामा टाँस्न सजिलो बनाउँछ।
बहु-स्तरित उत्पादन, प्राकृतिक र जीवनभर लगाउने, तपाईंको आँखा चमकदार र आकर्षक बनाउनुहोस्।
१००% मिन्क कपाल क्रूरताबाट बनाइएको, सफा र नरम लगाउन को लागी।
बिभिन्न व्यक्तिको आँखा र पक्षको कारण, तपाईको आवश्यकता अनुसार विभिन्न लम्बाई डिजाइन गरिएको।
√ 100% वास्तविक मिंक कपाल
Otton कपास र नरम ब्यान्ड
25 २-30--30० पटकसम्म लामो
× खराब सिंथेटिक फाइबर
× हार्ड ब्यान्ड र गन्दा फाइबर
Ber फाइबर ब्रेक गर्न सजिलो
अनुकूलित निजी लोगो उपलब्ध छ। हाम्रो डिजाइन टीम तपाइँको लोगो डिजाइन, बरौनी प्याकेजिंग डिजाइन र डिजाइन सुझाव को लागी सहयोगी हुन सक्छ।
उच्च गुणस्तरको ल्याशहरू सुनिश्चित गर्न, सामग्री देखि तयार तात्त्विक उत्पादनहरूमा, हाम्रो निरीक्षण टोलीलाई कडाईका साथ सामग्री, अर्ध-समाप्त बार्रेसन, समाप्त ल्याश क्वालिटी नियन्त्रण गर्न groups समूहमा विभाजन गरियो। प्रत्येक कदम क्वालिटी नियन्त्रण पेपर कार्यमा लेख्नेछ।
अर्ध-समाप्त ल्यास उत्पादन
प्याकिंग / स्प्यान>
झूटा eyelashes कसरी लागू गर्ने
तपाइँको आँखाको आकारको लागि सहि गलत गलत eyelashes पहिचान गर्दै।
तपाईको आखाँको आकारमा निर्भर गर्दै, तपाईले सही साइज स्ट्रिप ल्यासहरू चयन गर्नुहोस् भनेर निश्चित गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँको आँखा आकार hooded छ, तब झूटो eyelashes को एक लामो जोडी तपाइँ को लागी एक राम्रो फिट हुन सक्छ। यदि तपाईंसँग अधिक गोल आँखा आकार छ भने छोटो बार्रेको लागि जानुहोस् जसले अधिक मात्रा प्रदान गर्दछ।
सफा र राम्रोसँग जलाइएको कार्यक्षेत्र सुनिश्चित गर्नुहोस्
हेर, मैले धेरै समस्याहरू सामना गरेको थिएँ जब म आफैंले मेरा साथीहरूसँग नडराएको कोठामा झूटा बरबरीको आवेदनमा दौडिरहेको पाउँछुँ कि मेरो साथीहरू रिसाउँदै मलाई पर्खिरहेका छन् कि म आधा घण्टा ढिला भएको छु। यो बिर्सन सजिलो छ कि हामी सामग्रीको नाजुक टुक्राहरू ह्यान्डल गर्दैछौं, ग्लैम रंगको प्रकाश प्रयोग गरी तपाईले बारसाहरूलाई ठीकसँग हेरिरहनु भएको छ र यो पनी सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको बरौनी ग्लुको प्रयोग सहज हुनेछ।
ट्रेबाट ल्याष्टसको ध्यानपूर्वक पील गर्न चिमटी प्रयोग गर्नुहोस्।
यहाँ महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं ल्याश ब्यान्डको कुनाबाट कोर्रा उठाउनु हुन्छ र वास्तविक बरौनीबाट आफैंलाई उठाउनु हुँदैन। यो किनभने सम्भवतः यसको आँखामा पट्टी पनी चोट पुर्‍याउनु अघि तपाईले उनीहरुलाई चल्ने मौका पनि प्राप्त गर्नुभयो।
सही लम्बाई पाउनुहोस्!
उत्तम फिट सुनिश्चित गर्न, तपाईंको आफ्नै आँखाको बिरूद्धमा फड्काउनुहोस् बिरालोको भित्री (पातलो) कुना बिन्दुमा जहाँ तपाईंको पट्टि गाढा हुनेछ। यदि ल्याश तपाईंको पलक भन्दा लामो छ भने, बाहिरी किनारामा अधिक काट्नुहोस्।
मेकअप पूरा गर्नुहोस्
एक पटक तपाईंसँग तपाईंको झूटो कोर्रा आफ्नो पापको लागी लागू गर्न तयार छ, eyeliner को एक लेयर र त्यसपछि मस्कारको कोट जोड्नुहोस्, तपाईं सामान्य रूपमा। आफ्नो प्राकृतिक eyelashes curl गर्न स्वतन्त्र महसुस साथै यदि तपाईं थोरै अलि बढी 'अतिरिक्त' महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने।
बरौनी गोंद लागू गर्नुहोस्
चिमटीहरूद्वारा फट्याटलाई समात्दै, हप्काउने ब्यान्डको साथमा फडफड्नको पातलो तह लागू गर्नुहोस्। यो सजिलो बिट जस्तो देखिन्छ तर याद गर्नुहोस् कि सबै चिपकने अनुप्रयोग जस्तै, कम बढी छ।
एप्लिकेटर वा सानो ब्रशको प्रयोग गरेर, ल्याश ब्यान्डको अन्त्यबाट अन्तसम्म गोंदको पातलो तह लागू गर्नुहोस्। चिपकने धेरै लामो लामो चिरस्थायी झूटा बरौनी सुनिश्चित गर्न कडा हुनेछ। त्यसपछि चिप्स टेकी नभएसम्म केहि सेकेन्ड पर्खनुहोस्।
यहाँ एक मुख्य कुरा, चिप्लिन प्रत्यक्ष पलकमा लागू नगर्नुहोस्। चिपकने सुक्ने छ र यसको प्रभावकारिता चाँडै कम हुनेछ। तपाईको आँखाको आँखालाई र आँखालाई हानि गर्ने खतरा पनि हुन्छ।
गलत eyelashes लागू गर्नुहोस्
तपाईंको चिमटी प्रयोग गरेर, मध्यमा र अगाडि ध्यानपूर्वक स्ट्रिप ल्याश पिन्च गर्नुहोस्। ध्यानपूर्वक फ्ल्याक ब्यान्डलाई सीधा छालामा तपाईको प्राकृतिक कुद्नु भन्दा माथि राख्नुहोस्। तपाईको प्राकृतिक eyelashes को लागी गर्न को लागी या त अन्त बाट गलत eyelash तल तान्नुहोस्।
एकचोटी तपाईं ल्याशको स्थितिसँग खुसी हुनुहुन्छ, त्यसपछि ल्याश ब्यान्डमा कोमल सेकेन्ड लागू गर्नुहोस् केही सेकेन्डको लागि यो सेट नभएसम्म। अन्त्यमा, फिट सुरक्षित गर्न केहि अधिक सेकेन्डको लागि ह्यासको कुनाहरू समात्नुहोस्।
ब्लेन्ड त्यसपछि फेरी मिश्रण!
मस्करा प्रयोग गरेर, हल्का हल्का छोटो झुम्का टच गर्नुहोस् यो निश्चित गर्नका लागि यो तपाईंको वास्तविक ल्यासको साथ मिसिएको छ। तपाईं eyeliner झूटा ल्याश ब्यान्डमा यसलाई अधिक प्राकृतिक र प्रामाणिक रूप दिनको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। स्वाभाविक रूपमा, यो वास्तवमा लागू हुन्छ किनकि तपाईले फिट देख्नुहुन्छ र कुनै ब्लिन्डि maybe आवश्यक छैन।
लुक समाप्त गर्नुहोस्
आफ्नो औंलाहरु को उपयोग गरी, सावधानीपूर्वक वक्रलाई प्रोत्साहित गर्नका लागी बारमा धक्का दिनुहोस्। यसले उनीहरूलाई थोरै मात्राको भोल्यूम प्रदान गर्न र उनीहरूलाई ठूलो रात अघि स्प्रस गर्न मद्दत गर्दछ।
हाम्रो गलत eyelashes RoHS प्रमाणपत्र पारित, तपाईं हाम्रो गुणवत्ता र उत्पादन सुरक्षा को आश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ।
थप सोधपुछको लागि, तपाइँलाई स्वागत छ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस कुनै पनि समयमा अधिक जानकारी को लागी। हाम्रो बिक्री टीम 24 घण्टा भित्र सबै तपाइँको सोधपुछको जवाफ दिनेछ।
अघिल्लो: थोक अनुकूलित निजी लेबल बक्सहरू थ्रीडी ल्याशहरू १००% वास्तविक मिंक eyelashes विक्रेता
अर्को: ALLISON शैली थोक निजी लेबल २mm मिमी मिंक झूटा eyelashes
२mm मिमि eyelashes
२mm मीमी कोर्रा
कारखाना थोक फ्लफी 3d 100% मिंक eyelashes ...
झूटा eyelashes निर्माता थोक निजी ...
थोक सजिलो पूर्ण पट्टी 3d 5d 100% मिंक एल लागू गर्न को लागी ...
निजीकृत निजी लेबल बरौनी बक्स बल्क लोन ...
थ्रीडी मिंक eyelashes प्रसाधन सामग्री थोक गलत मि ...
बल्क आई लेशहरू जलरोधक पुन: प्रयोज्य क्लासिक3डी ...
बरौनी विस्तार, मिंक कोर्रा, बरौनी विक्रेताहरू, आँखा ल्याश, आईलाइनर, आँखा लाइनर,